Ny 24 septambra 2019 lasa teo teny amin’ny tetezan’ny « Hotel Seoul ». Tokony ho tamin’ny 10 ora alina no niseho ny sakoroka. Mpivady tratra alina handeha hody no sendra azy ireto. Tsy vitan’ny namono ilay rangahy ireto mpanendaka fa saika hanolana ilay vehivavy ihany koa. Feo mitabataba no henon’ny Polisy manao fisafoana amin’ny alina ka nanaitra azy ireo nanatona hijery ny zava-mitranga. Vao nahita ireto polisy anefa ireto mpanendaka dia vaky nandositra. Raikitra ny fifanenjehana ka iray no tratra raha tafaporitsaka ny ambiny. Natao avy hatrany ny famotorana ity tratra ka nanoro ny toerana hipetrahan’ireo roalahy namany hafa. Tsy niandry ela fa vao maraina dia nosamborina tao amin’ny lava-tranony ihany koa izy roalahy..